Manniin barnootaa 32 ol keessatti qormanni kutaa 12ffaa hatameera - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Manniin barnootaa 32 ol keessatti qormanni kutaa 12ffaa hatameera
Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. Kun qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa.
Manniin barnoota naannoo Amaaraa qormanni itti hatame ykn deebiin qormaataa duratti barame haga himamaa fi tilmaamamaa turee oli. Akka qorannoon godhame ragaa bayutti yoo xiqqaate manniin barnoota 32 keessatti qormaannii gosa barnoota 5 (Bayolojii, Kemistirii, Ikonoomiksii, Siiviksii fi Seenaa) hatamuu isaa mirkanneeffanneera.
Hanni qormaataa hedduu badhaa ture. Manniin barnootaa qormaannii keessatti hatamuun hanga ammaa mirkanaaye mana barnoota Belay Zeleke, Gojem Ber, Dangila, Dembecha, Damot, Enjibara, Tana Haik, Merawi, Kidamaja, Addis Kidam, Agaw Midir, Shikudar, Yismala, Quarit, Abay Mich, Durbete, Jiga, Shindy, Gonji, Fitawurari Habtemariyam, Genet,Abo, Girchech fi Qunzila dha.
Manni barnootaa heddu kan qormaachisiise barattoota dhibba heddutti laakkayamu(bakka tokko tokkotti kumaa ol) ta’uun isaa barattoonni kuma heddutti laakkayaman deebii qormataa dursanii osoo hin argatin hin oolle.
Bal’innaa fi sadarkaan hanni kun itti qindeeffame kan akeeku dhimmi kun gadi fageenyaan qoratamuu kan qabu ta’uu isaati. Qabxiin seeraan ala galmeeffame haqamuu fi yakkamaan hanna kana keesssaa harka qabu qbamuu fi adabamuu qaba.
Barattoota naannoo biroo mitii ijoolleen naannoo Amaaraa fi maatiin isaanii akkamitti barattoonni manniin barnoota tokko tokko qabdii raajii jedhamu, kan ammas walfakkaatu, akka galmeessan gaafachuu qabu. Barattoonni qormaata hatan carraa barattoota naannoo biraa qofa osoo hin taane kan isaaniis akka cufaa jiran hubatamutu irra jira.
Ejensiin Qormaata Biyyoolessaa qabxii barattoota kutaa 12ffaa ibsuu isaa hordofee qormaanni hatamuun isaa bal’inaan himamaa tureera. Qorannoon geggeessines kanuma kan dhugoomsuudha. Ejensichii fi ministerri barnootaa qabxiin barattoota 5000 rakkoo kan qabu ta’uu ibseera. Akka ibsa Ejensichaatti rakkoo qaba jedhamee ammatti kan haqame qabxii barattoota 68 qofa. Dhimmi qabxii barattoota 846 qoratamaa kan jiru ta’uu ibseera, Ejensichi. Kun sadarkaa rakkoo uumamee tasuma waan ibsuu miti.
SOURCENational Educational Assessment and Examination Agency (NEAEA)
Previous articleFilannoof baatii 9tu hafe. Hegereen Finfinnee maal ta’uuf?
Next articlePaartii bu’uuressuuf mallattoo barbaachisuu gara 4000 ol guddisuun bibixxiilamiinsa hir’isuu mala